Iphone-ka 2020-ka wuxuu yeelan doonaa jiilka xiga ee 5G | Wararka IPhone
Iphone-ka 2020 wuxuu yeelan doonaa jiilka xiga 5G
Iphone-ka 2020 wuxuu yeelan doonaa jiilka xiga ee 5G. Qeybtii ugu dambeysay ee Apple waxaa lasoo bandhigay iPhone 11-ka cusub ee sanadkan. Kaamirad ka wanaagsan, ismaamul fiican, iyo wax kale oo yar. Horey ayaa loo ogaa inaysan kudarsanayn shabakada gudbinta xogta cusub ee 5G. Apple waxay uga tagtay moodeelka xiga ee 2020, iyagoon ka walwalaynin in shirkadaha kale ay horey ugu darsadeen tikniyoolajiyaddan boosteejooyinkooda cusub. Gaabis fiican, laakiin amaan ah.
Sidii horeba waan faallay Toddobaadyo ka hor, Apple waxay la saxeexatay heshiis sahay 5G chip ah lixda sano ee soo socota shirkadda Qualcomm. Waxaan sidoo kale ka faalloonay Tim Cook wuxuu ka iibsaday qaybtiisa '5G chip' Intel, iyo shatiyadiisa u dhiganta, si ay ugu soo saaraan moodeelladooda tiknoolajiyaddan wixii ka dambeeya, laga yaabee sannadka 2021, oo markaa si tartiib tartiib ah ugu tiirsanayn Qualcomm oo ah shirkadda keliya ee wax iibisa.
Shirkaddu waxay si buuxda u ogtahay in 5G uu noqon doono heerka cusub ee caalamiga ah ee gudbinta xogta. Waana uu ka shaqeynayaa. Shabakad qaali ah in loo hirgaliyo kuwa ka shaqeeya taleefannada, in kasta oo mararka qaarkood ay jiraan magaalooyin kooban oo meeraha ah oo ay durba run ka noqonayso, runta ayaa ah in weli waqti loo hayo in 5G laga dhigo dadka intiisa badan. Marka majiraan wax deg deg ah.
Waxaan sidoo kale ku sharaxeynaa mid kale maqaal, in Teknolojiyada 5G waxay isticmaashaa laba qaybood oo kala duwan, MmWave iyo Sub-6Ghz. Midka hore waa mid aad u sarreeya, oo leh xawaare gudbineed oo sarreeya iyo tiro badan oo isku xirnaanta isku mar ah, laakiin leh masaafo gaaban. Dhinaca kale, Sub-6Ghz aad ayuu uga gaabiyaa, oo wuxuu daboolaa tiro aad u badan oo xaddidan oo terminaalyada ah, dhinaca kalena, gacan ka qabashada ayaa aad uga weyn. Isku ekaansho ku saabsan gudbinta raadiyaha, waxay noqon laheyd sida FM iyo AM.
Waan sharxayaa tan maxaa yeelay Chips-yada moodeelka '5G' ee hadda jira kuma shaqeyn karaan labada qaybood. Tani waxay keenaysaa Telefoonada 5G ee maanta bilaabanaya in la iibiyo ayaa kaliya la shaqeeya labada koox midkood. Ma xasuusataa moobiilladii ugu horreeyay ee Shiinaha ee 4G, oo aan ka shaqeynayn shabakadaha Yurub?
Mid ka mid ah hal-ku-dhigyada Apple ayaa ah caam ahaanta qalabkeeda. Shirkaddu waxay ku dari doontaa tiknoolajiyada 5G marka isla aaladda ay ku xirmi karto labada qaybood ee isweydaarsan kara. IPhone wuxuu ka shaqeeyaa wadan kasta oo adduunka ah, oo leh 5G, wuu sii wadi doonaa inuu sidaas sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Iphone-ka 2020 wuxuu yeelan doonaa jiilka xiga 5G
Apple Arcade hadda waxaa lagu heli karaa tijaabo bilaash ah oo bil ah
Baahida hore ee iPhone 11 ayaa wali ka fiican sidii la filayay